शक्तिशाली चक्रवात ‘टाउ टेई’ को असर नेपालमा ५ दिन पर्ने « Sajhapath.com
आश्विन ५, २०७८ मंगलबार
काठमाडौं,जेठ ४ । अरब सागरमा विकसित भएको ‘टाउ टेई’ नामको शक्तिशाली चक्रवातको असर नेपालमा पाँच दिन पर्ने भएको छ । अहिलेकै समयमा पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली विकसित भई प्री–मनसुन थप सक्रिय भएकाले पनि नेपालमा सोमबारदेखि दोहोरो मौसमी असर सुरु भएको छ । अहिले पनि अरब सागरमा आफ्नो उग्र रूप निर्माण गर्न सक्रिय रहेको ‘टाउ टेई’ चक्रवात जमिनमा नखसेसम्म यसले आसपासका क्षेत्रमा असर पु–याउने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । चक्रवातले प्रत्यक्ष असर नपारे पनि भारत हुँदै आउँदा अप्रत्यक्ष असर बढी देखिने भएको हो ।
मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले भने, “सोमबारदेखि आउँदो शुक्रबारसम्म यस चक्रवातको हल्का असर नेपालमा पर्नेछ, शनिबारदेखि मौसममा सुधार हुँदै जानेछ ।” जसअनुसार सोमबार मध्यदेखि नै नेपालको अधिकांश आकाशमा बादल लागेको छ ।
उनका अनुसार भारतमा यस चक्रवातको असर विगत केही दिनयतादेखि नै चर्को रूपमा देखिएको छ । तर त्यो असर नेपालसम्म आइपुग्दा कमजोर हुने भएकाले पनि ढिला र कम असर पर्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । महाशाखाका अनुसार मङ्गलबारसम्म सामान्य रहने चक्रवातको असर बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म भने अलिक बढी हुनेछ । बुधबारदेखि आकाश पूर्ण रूपमा बादलले ढाक्ने र विभिन्न क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना महाशाखाले औँल्याएको छ ।
यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रदेश १ मा एमाले छाडेर १० सांसदले रोजे एकिकृत समाजवादी
विराटनगर,भदौ १६ । प्रदेश १ का नेकपा एमालेका १० जना सांसदले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा
रू. १ अर्ब २१ करोडका प्लाष्टिकका प्लेट, सीट, फिल्म आयात
काठमाडौं,भदौ ३। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नेपालमा रू. १ अर्ब २१ करोड बराबरको प्लाष्टिक प्लेट,
टोखा नगरको झोरमा वृक्षरोपण सम्पन्न [भिडियो]
काठमाडौ,असार २८ । टोखा नगरपालिका वडा नम्बर १ स्थित झोरमा रहेको बाल उद्यान आसपास क्षेत्रमा
निजीक्षेत्रलाई ५ जलविद्युत् आयोजना दिइने
काठमाडौं,जेठ ३१ । सरकारले आफैले अध्ययन गरेको विभिन्न ५ जलविद्युत्् आयोजनालाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजीक्षेत्रलाई निर्माण
आजदेखि सोह्र श्राद्ध अर्थात् पितृ पक्ष प्रारम्भ
संखुवासभा सामूहिक हत्याकाण्डः प्रमुख योजनाकार नै अर्कै
सर्वोच्चको लिखित जवाफः प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलास बाहिर बस्न मिल्दैन
नुवाकोट थान्सिङका शिक्षक पाठकको निधन
नुवाकोटमा एकीकृत समाजवादीको जिल्ला कमिटी विस्तार
योजनावद्ध ढङ्गबाट ५ जनाको समूहले ६ जनाकाे हत्या गरेको खुलासा
नुवाकोटका राजेन्द्रको रिटको सुनुवाइ: खोलामा डोजर पस्नै नपाउने कानुन बनाउन सर्वोच्चको आदेश
आजदेखि भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा घट्यो कुखुराको मासुको मूल्य